Barlamaanka Federaalka oo maanta isku farasaaray xarunta goloha shacabka ee Muqdisho. – Radio Daljir
Barlamaanka Federaalka oo maanta isku farasaaray xarunta goloha shacabka ee Muqdisho.
Muqdisho, Dec, 14 – Barlamaanka dawladda federaalka ee Soomaliya ayaa maanta rabshad gacan ka hadal ah ku dhexmartay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho taas oo salka ku haysa khilaafka la xiriira xilkaqaadistii shalay lagu sameeyey guddoomiye Shariif Xasan Sheikh Aadan.
Arrintaan ayaa timid ka dib markii guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka C/weli Muuddeey iyo xildhibaano la socday ay isku dayeen inay shirku qabsadaan xarunta golaha shacabka oo uu ka socday shir ay lahaayeen xildhibaanadii shalay sheegay inay rideen guddoomiye Sh. Xasan. Taas ayaana keentay inay labada dhinac isku dhacaan oo goobtaasi isku feeraan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada ilaalada u ah guddoomiye ku xigeenku ay isku dayeen inay xildhibaada goobta ku shirayey xoog ku kale eryaan, balse ay xildhibaanadu qoryaha ku qabsadeed askarta uuna halkaasi gacan ka hadalku ka bilawday.
Arrintaas ayaa salka ku haysa xilka qaadistii shalay lagu sameeyey guddoomiyaha taas oo qaar ka mid ah xildhibaanadu ay u arkaan afduub siyaasadeed oo aan melena sharciga ka waafaqsanayn, mana jiro wax war ah oo arrintaasi ku saabsan oo ka soo baxay golaha xukuumadda iyo madaxtooyada midna.